लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा २७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रति शेयर आम्दानी कति ? – Insurance Khabar
लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा २७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रति शेयर आम्दानी कति ?
प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७६, सोमबार ०९:५८
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को १२ महिनामा ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आमदानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको नाफा २७ प्रतिशतले बढी हो ।
२४ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जगेडा कोषमा २४ करोड ४६ लाख ४६ लाख रपैयाँ सञ्चिती रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तले जगेडा कोषमा ७८ प्रतिशले जगेडा कोषमा बृद्धि गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा लघुवित्तले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाा निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लघुवित्तको निक्षेप ३५ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो भने कर्जा प्रवाह ३३ प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो ।
लघुवित्तको प्रति शेयर आम्दानी ४५ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । निस्क्रिय कर्जा १ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । मुल्य आम्दानी अनुपात १४ गुणा रहेको छ ।